Filipina: Aiza mba Hihaona Vehivavy tsara Tarehy - Philippines Tokana
Filipina: Aiza mba Hihaona Vehivavy tsara Tarehy — Philippines Tokana
No tadiavinao mba hitsidika an’i Filipina, nefa tsy mahalala hoe aiza no manomboka? Ny manontolo firenena ao Filipina no nisaraka ho roa lehibe ny faritra Avaratr’i Luzon, ary Atsimon’i Luzon. Io, ary miaraka amin’ny zava-misy efa mihoatra ny zato amin’ireo nosy afaka manao izany hampitahorana na dia sarotra eo hoe aiza no hanombohana azy, na handeha voalohany. Raha misy tanàna lehibe sy tsara fantatra ny toerana toy ny Manilla na Subic Tanàna, misy ihany koa ny maro ny harena miafina sy ny hafa tsara tarehy, mahafinaritra hihaona toerana lehibe ny olona ary mety hahita ny vehivavy ny nofy. Avy any Filipina ny mahita vehivavy tsara tarehy ary na dia ny vadiny dia afaka ny ho mahafinaritra, fotsiny ianao mila mahalala ny toerana hitadiavana.
Alohan’ny mitsoraka ho tsara ny sasany ny tora-pasika, tanàna amoron-dranomasina, ary indrindra any ambanivohitra toerana aoka handrakotra ny tena tsara, miafina getaway fa mbola manana ny tanàna sy ny mikasika ny espaniola, ary mazava ho azy Filipiana kolontsaina mba hankafy. Vigan aho locos Sur dia toerana mahafinaritra ny mitsidika raha mahafinaritra anao mahita ny lova ao an-toerana, ny toerana, dia tsara ny fiangonana, ary mazava ho azy ny tora-pasika afa-tsy ao anatin’ny telopolo minitra ny adiny iray izy. Ny ampahany Atsimon’i Luzon, izany no tsy midika hoe ny akaiky indrindra ny tanàn-dehibe na ny masoivoho, fa raha tadiavinao mba ho afa-maina sy ny hiaina zava-baovao izany dia toerana lehibe hanombohana. Na izany aza, ny vahoaka eto ireo tena namana, izay manampy amin’ny mpizaha tany, ary kafe no tena mahafinaritra. Raha toa ianao kokoa ny»sosialy lolo»izany no mahafinaritra ny toerana hanombohana. Raha toa ianao an-trano fisotroana sy ny alina lehibe toe-javatra izany antoka fa tsy ny fitoerana ho anareo, dia toy izany no tony kokoa na miadana ny dian’ny toerana mba hitsidika, na hijanona. Ny vehivavy eto ihany koa ireo tena namana, ary noho ireo mpizaha-tany tsy matetika izany toerana izany matetika dia mahatonga anao bebe kokoa ny»miafina gem». Dia anao ny traikefa nahafinaritra karazana? Samar no tsara tarehy amin’ny faritany tsy isalasalana fa ny sasany amin’ireo tsara indrindra, hatsaram-panahy, ary fitiavana ny vehivavy rehetra ao Filipina. Samar rehetra manodidina dia feno niainany, ny tendrombohitra, ny fahafahana fitsangantsanganana, toby, sy ny maro hafa. Efa ho isan-tanàna kely fa tonga ianao manerana eto dia ahazoana aina kokoa ny mpizaha-tany, ary mihoatra noho ny toe-javatra tsy ny olona hihaona amin’ny ambany indrindra ho afaka hiteny, fara fahakeliny, fototra malagasy.
Raha miteny kely ny Zavatra afaka manampy anao, na dia ny fitsidihana voalohany tokony hanao tsara
Ny iray amin’ireo malaza manintona ao Samar no Laguna Damara Lava-bato, izay hita tao an-tanànan’i Cambia. Ny lava-bato eto dia maro voly, afaka mandeha rafting, adventuring any an-tendrombohitra, sy ny maro hafa. Saika ny rehetra ny tanàna ao an-toerana manana karazana toeram-pivarotana, ary raha tsy, trano fisotroana kafe izy ireo»sari-sari»toeram-pivarotana izay tsy hanahirana ireo toeram-pivarotana. Na izany aza, mipetraka ivelan’ny»sari-sari»store sy ny fananana vitsivitsy mangatsiaka ireo na mihinana ny sakafo dia mahazatra, ary dia fomba lehibe mba hihaona olona vaovao ao anatin’izany ny tsara tarehy, ny vehivavy tokan-tena fa ho faly hihaona aminao ary hampiseho anao ny manodidina. Raha toa ka ianao amin’ny teti-bola, na fotsiny mitady ho tia ny zavatra tsotra eo amin’ny fiainana, mandray ny kolontsaina ao an-toerana, ary avy eo hijery Iloilo dia toerana lehibe mba handeha, sy Sur ny Nosy dia mampino tsara tarehy ary ny iray hafa harena miafina ho an’ny mponina sy ny mpizahatany. Raha mbola tsotra kokoa ny tontolo iainana, dia lehibe noho ny mankafy ny sasany matsiro, eo an-toerana ny hazandrano, hialana sasatra, sy ny fanamarinana avy isan-karazany UNESCO Toerana Lovan’izao Tontolo izao. Misy be dia be ny tsara tarehy ny fanjanahan-tany sy ny trano hafa lova trano izay fipoahana mba tsidiho.
Ny tora-pasika eto dia misy tsy feno fotsy fasika sy ny mangarahara, manga ny rano
Misy ihany koa ny maro ny tokan-tena, hanampy, sy sariaka vehivavy izay mety ho hita manerana ny tanàna ao an-toerana eto ary ny tora-pasika. Tena malaza toerana halehany ho amin’ny andro lavitra, ary be dia be ny Filipiana ho tonga eto tsy tapaka mba hankafy ny toerana, mitsangantsangana, sy hifanerasera. Iloilo koa conveniently toerana adiny iray monja miala avy ao amin’ny tanàna lehibe sy ny seranam-piaramanidina hita ao Manilla, Filipina. Raha tia-tongotra sy ny fandraisana mampino hitan’ny olona, noho ny Bicol no voalohany toerana mba hitsidika, hihaona olona vaovao, ary conveniently manana tanàna teo feno ny toeram-pivarotana, tsena, eny, sy ny maro hafa (Legazpi Tanàna, Albay). Tsy be mpitsidika eto, hita ao ny Daty, sy ny maro takatry ny lomano ny lesona ao an-toerana ny Filipiana — toerana lehibe iray hafa mba hihaona olona vaovao, ary hahita ny Filipina ny nofy. Raha mbola tsy hita ny volkano eo amin’ny tena fiainana, ary izany no karazana zavatra te hifoha indray maraina, ary ho afaka ny mahita ny avy lavitra na ny nihanika dia ny Maya Volkano akaikin’ny Legazpi Tanàna, Albay, Filipina dia tsy mampino ny toerana mba hitsidika, ary ho. Nosy roa mifanakaiky Carmona sy Alagoas ihany koa mahatahotra toerana mba hitsidika, ny mponina ao an-toerana no tena namana, sy ny tokan-tena Filipinas eto dia tsy manam-petra. Ny toetr’andro eto dia be taona rehetra manodidina, ka dia afaka foana hankafy ny hitan’ny olona, ary mahita tsara tarehy, tokana Filipinas mandeha ny tora-pasika, ny toeram-pivarotana, sy ny tanàna ao an-toerana, sy ny manodidina ny nosy. Raha toa ianao ho scuba-diving nandritra ny andro, ary nankafy ny maresaka nightlife feno sariaka, tsara fanahy, tsara fo ireo Filipiana dia Tatsinanana Negros, Filipina dia toerana lehibe mba tsidiho. Misy taonina ny ambany-manan-danja sy ahazoana aina kokoa ny toerana manerana ny tanàna ianao, dia afaka mijanona ao an, hijery ny tora-pasika, ary jereo ny tsy mampino ny riandrano. Tour guides dia hita na aiza na aiza, fa izany koa dia mora ny mahita ary hihaona zazavavy tsara tarehy izay manam-pahalalana ny faritra eo an-toerana izay te-ho sambatra, mba hampiseho aminao ny manodidina. Misy ihany koa be dia be ny tsara tarehy any an-tendrombohitra resorts, noho izany dia afaka ny ho eo akaiky eo an-toerana mahasarika, ny tanàna, sy ho aina raha sambatra. Apo Nosy no tena misy fizahan-tany namana-toerana, amin’ny taonina ny backpackers, sy ny maro ny vehivavy izay tsy tapaka sarangan’ny mpiasa, ny sasany any an-tsekoly, sy ny hafa izay miasa ao amin’ny fianakaviany ny tsena eo an-toerana na ny raharaham-barotra. Noho izany, dia ho toy ny mora toy ny mandeha an-magazay na café ny tany ny tenanao ho daty voalohany, ary mety hahita ny Filipina ny nofy. Nomena ny maro ny nosy, ny tanàna, ary manintona mpizahatany ny Filipina dia tena tsy misy farany amin’ny fahafahana manao zavatra tsara tarehy, miavaka, sy mahafinaritra ny toerana mba tsidiho. Ny tahan’ny lehilahy ny vehivavy dia lehibe any Filipina rehetra manodidina, ary tsy sarotra ho toy ny vahiny hihaona tsara Filipina. Ny toerana ny voalaza eto dia tsy manam-paharoa, ary raha mbola tsy toy matetika nitsidika ny vahiny mbola misy be dia be ny eo an-toerana ireo mpiasa vahiny izay monina aty, namana ny olona, ary eo an-toerana ny polisy fa ireo koa dia voaray tsara sy mora. Na dia tsy mahita ny karazana fananganana, ny tora-pasika, na ny mpizaha tany toerana ho toy ny efa nanantena fa handeha ho an’ny eo an-toerana ny Zavatra kilasy sy variana fotsiny manodidina amin’ny trano fisakafoanana, trano fisotroana kafe, ary mihantona avy dia azo antoka fa ny tany dia ny daty na roa. Tsarovy, ny fivoriana Filipiana, amin’ny ankapobeny, dia mety ho ny fanalahidin ny fivoriana mahafinaritra Filipina ny vehivavy, ka tsy midika mametra-tena ho hany»mangatsiaka fomba»
← Filipiana Mampiaraka - Filipiana STO free Mampiaraka
Ankizivavy ao Filipina, ny alalan 'ny mason' ireo mpanao dia lavitra za-draharaha →